Haddii aan Soomaliya si dhaqso ah dawlad looga samayn dagaal qabiil oo lagu hoobto ayaa ka dhici kara qolo ka badbaadi kartaana ma jirto.
Soomaliya oo mar loo aqoon jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa dadka adduunka hadda ku gartaan Soomaaliya toddobadaan astaan oo kala ah: Warlord, Starvation, Rival functions, kidnap, Chaos, Refugees, Clan warfare. Astaamahan haddii aan af Soomaali ku sheegno waa sidan dagaal ooge, macluul, kooxo iska soo horjeeda, Afduub, fawdo,Qaxooti, iyo dagaal qabiil. Dadka Soomaalida meel kasta ha joogaan dhiilo maahane ma maqlaan dhawaaq farxad leh. Inta la ogyahay Soomaaliya 13kaan sano mar ay ka liidato taariikhda laguma hayo. Waxaa lumay dadkii, hantidii, dhaqankii, garaadkii, diintii, walaaltinimadii, isjacaylkii, iyo wadanimadii.
Dadka adduunka markii ay weydiiyaan Soomaalida waxa ay ku dagaalayaan ama dawlad u dhisan la’ yihiin Somalida waa bixin waayeen jawaab kaafi ah. Xataa kuwii dagaalamay ayaanan garanayn waxa ay ku dagaalamayaan. In badan oo ka mid ah dadka Addunka ku nool ugu danbayntii waxa ay isku qanciyaan in dadka Soomaalida ay macluuli hayso haba ugu horeeyaan hogaamiyaasha kooxaha oo sababta jabhadahii riday dawladda iyo iyo dagaalka qabiilooyinka iyo isku qabsashada daaqa iyo magaalooyinka keentay ay tahay gaajo ka cabsi iyo doolshada yaan dhinacaaga lagaa qadin!.
Hadii uu iimaan jiro waxaan ma dhici lahaayeen?.
Kuwo kalena waxa ay isku qanciyeen in meesha jaahilnimo ku jirto oo Soomaalida aanay garanayn si dawlad loo noqdo ama loo samaysto!.
Hooyo Soomaaliyeed oo carruurteeda aadka u gaajaysan ku haysa xerada xaqootiga ee Dhadhaab (Sawirka AP Sept 28, 2000), ilaa hadda qaxootiga Soomaalida ee halkaas ku dhaqan rajadadooda nabada soomaaliya waa mid aad u hoosaysa.. Dhegeyso warbixintii maanta (Dec 18, 2003) ee VOA Dhegeyso Halkani
Soomaalidii hore oo uu dagaalkoodu u badnaa xoolo la kala qaaday ama gabar la fara xumeeyay ama daaq gaajada ugama baqi jirin sida hadda kuwa dagaalka wada ama abaabula. Keligood ayaa geed hoostiis ku shiri jiray oo heshiin jiray waayo iimaan bay lahaayeen. Inkastoo ay weli jiraan dad soomaali ah oo iimaan leh wixii ilaah siiyayna ku qanacsan haddana waxaa batay kuwa addun raadis keliya u smaynayo wax kasta oo uu ku heli karo.
Beryahan waxaa sii batay dagaalada lagu hoobto ee dhexmara qabaa’ilka Soomaaliyeed oo ah dad walaalo ah oo wada dhashay abti, adeer, eedo, ayeeyo, habar yar, seedi ama dumaashi isu wada ah. Waxa keliya oo joojin kara waa in la helo dawlad sharci ka soo saarta dagaalka qabiilooyonka oo xoog ku dhexgasha oo qoladii nabadda diida talaabo ka qaada.
Xaaladda ay hadda Soomaalidu ku sugan tahay iyo sida uu udhumay kala danbaytii iyo ismaqalkii iyo tirada hubka culus ee gacantooda ku jira marna ma suurtoobayso in ay wax xallin karaan madaxda qabiillada oo awooddii lagala wareegay lana mariyay wadadii dawladdii jamhuuriyadda Soomaaliya la oran jiray Ilaa dawlad dhaqso ah la dhisona dhiigga waa qubanayaa, macluusha waa jiraysaa lacagta been abuurka ah waa jiraysaa, dekedaha iyo garoonada caalamiga ah ee dayaaradaha waa weyn waa xirnaanayaan, shaqo la,aanta dugsi la,aanta ammaan la,aanta daryeel la,aanta, dhac, qaxa, iyo badaha oo lagu dhinto waa soconaysaa.
Anigu cilmul qaybka ma ogi oo ilaah keliya uun baa og.waxaanse ka digayaa dawlad la;aanta Soomaalida iyo qarnigan kow iyo labaatanaad. Hogaamiyeyaasha Soomaalida, wax garadka, aqoonyahannada, iyo dhallintaba waxaan ku boorinayaa in cabsida gaajada iyo sad bursiga, iyo xukun u dagaalankaba la iska dhaafo oo ilaahay dartii iyo ka naxidda dadkaaga uu qof walba nabadda uga shaqeeyo lana dhiso dawlad Soomaaliyeed taasoo u roon qofkasta oo Soomaali ah ama ha yaraado ama ha weynaado. Ka shaqee danta guud tan carrurta Soomaaliyeed ogwna in la noolaan karo adigoo aan madax ahayn inta yare e ilaahay kuugu talo galay inaad noolaato kana tag addunka adigoo aan dulminin qofna.
NOLOSHA QAXOOTIGA SOOMAALIDA KU DHAQAN KENYA
US Senate: Ninkii Seexdaa Sacii Dibi Dhalay
Soddon saacadood oo soo jeed iyo dhafar ayay ku baaqeen republicans si ay ugu xadaan codka caawa markii ay demoqraadiga hurdoodaan Guji